Clematis - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Clematis
Cematis ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
clematis ပင်ကို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသော်လည်း၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ သွေးပြန်ကြောဖောင်းခြင်း၊ ကာလသားရောဂါ၊ ဂေါက်ရောဂါ၊ အရိုးရောဂါများ၊ အရေပြားရောဂါများနှင့် ခန္ဓါကိုယ်တွင် အရည်ဓါတ်စုခြင်းတို့ကို ကုသရန် အသုံးပြုကြသည်။
အချို့က ဆေးပင်ကို အရေပြားပေါ်တွင် အရေကြည်ဖုပေါက်ခြင်း၊ ပိုးဝင်သော ဒဏ်ရာများ၊အနာများကို ကုသရန် တိုက်ရိုက်လိမ်ခြင်းအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။
ဤဆေးပင်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး လုံလောက်သော လေ့လာမှုများမရှိသော်လည်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ သို့သော် ဆေးပင်မှ ရသော လတ်ဆတ်သော အရည်တွင် အဆီတစ်မျိုးဖြစ်သော protoanemonin ပါပြီး ၎င်းသည် အရေပြားနှင့် အမြှေးပါးများကို စားလောင်စေသည် ဟု လေ့လာမှုအချို့ ပြဆိုကြသည်။
Cematis အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးလွန်ခြင်းကို ကုသရန် မီးသွေးကို အသုံးပြုရသည်။
ဤဆေးပင်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး တိတိကျကျ မသိရသောကြောင့် ခေတ်မီသော ကုထုံးများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဘေးကင်းစိတ်ချရပါသည်။
Cematis က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ဤဆေးပင်ကို လတ်ဆတ်သောအပင်ကို အသုံးပြုရန်နှင့် အရေပြားပေါ်သို့ တိုက်ရိုက်လိမ်းခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ရှိနေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် စိတ်မချရပါ။ အပင်အခြောက်ကို သောက်ရန် သို့မဟုတ် လိမ်းရန်သည်လည်း စိတ်ချရသည်ဟု သေသေချာချာမသိကြရပါ။ ထို့ကြောင့် ဘေးကင်းစေရန် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
Cematis ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
ဤဆေးပင်တွင် သေဆုံးနိုင်ခြင်း အပါအဝင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာရှိသည်။
•	အမြှေးပါးများ ဓါတ်မတည့် ရောင်ယမ်းခြင်း၊
•	ဗိုက်ရစ်နာခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း။
•	အလွန်အမင်း ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
•	ခေါင်းမူးခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ခြင်း။
Cematis ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
ဤဆေးပင်သည် အခြားသော သင်အသုံးပြုနေသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်သည်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ အနောက်တိုင်းဆေးများနှင့် အတူသောက်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။
Cematis အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ရေထဲတွင် အဆီအနှစ် ဝ.၅ မှ ၂ မီလီလီတာအထိ ကို တစ်နေ့လျှင် သုံးကြိမ် ရောစပ်သောက်သုံးနိုင်သည်။
Cematis က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Clematis. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 628-clematis.aspx?activeingredientid=628&activeingredientname=clematis. Assessed August 7, 2016.
Clematis. http://www.drugs.com/npp/clematis.html. Assessed August 7, 2016Skidmore-Roth, Linda. Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version.
Clematis. http://www.drugs.com/npp/clematis.html. Assessed August 7, 2016
မိန်းမကိုယ်နှုတ်ခမ်းသားမှာ အဖုအကျိတ်အလုံးလေးတွေ စမ်းမိတယ်။ ဘာရောဂါဖြစ်နိုင်လဲ ။ ။